OnePlus Nord 5G dia ofisialy: Snapdragon 765G, hatramin'ny 12 GB RAM sy Android 10 | Androidsis
OnePlus Nampanantena tamin'ny 21 Jolay fa handefa smartphone finday avo lenta sy hanatanteraka ny fampanantenany, dia manambara amin'ny fomba ofisialy ny telefaona OnePlus Avaratra miaraka amin'ny fifandraisana 5G. Izy io dia fitaovana iray izay ho safidy lehibe eo anelanelan'ny terminal izay hanolotra fifandraisana haingam-pandeha amin'ny vidin'ny fandravana.
Ny filokana vaovao dia hamela azy hifaninana amin'ireo mpanamboatra hafa, hanome ny mpanjifany configurations samy hafa hisafidianana ny vaovao OnePlus Nord 5G. Mampanantena haingana ny orinasa, kalitaon'ny sary ary kalitaon'ny famaranana telefaona.
1 OnePlus Nord 5G, ny zava-drehetra momba ity finday vaovao ity
OnePlus Nord 5G, ny zava-drehetra momba ity finday vaovao ity
OnePlus North 5G Tonga amin'ny safidy iray hafa hisafidianana aorian'ny fandefasana ny OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro, fa mitazona vidiny antonony. Ny Nord dia mampiditra ny efijery Fluid AMOLED 6,44-inch miaraka amin'ny vahaolana Full HD +, ny efijery famelomana 90 Hz ary ny tahan'ny 20: 9.
Ny telefaona dia manana endrika mitovy amin'ny andiany 8, ny filokana no misafidy Snapdragon 765G miaraka amin'ny modem 5G, Puce graphics Adreno 620, safidy fitadidiana sy fitehirizana roa, 8/12 an'ny LPDDR4X RAM ary 128/256 GB ROM amin'ny hafainganana UFS2.1. Ny batterie dia 4.115 mAh miaraka amina 30T hatramin'ny 30W Warp Charge.
El OnePlus Nord 5G dia miavaka amin'ny fampidirana fakan-tsary hatramin'ny enina, ny efatra aoriana dia 48 MP Sony sensor lehibe, arahan'ny zoro 8 MP, makro 2 MP ary sensor lalina 5 MP. Efa eo anoloana ianao manana MP 32 avy amin'ny mpanamboatra Sony ary squire mankany amin'ny sisiny misy zoro 8 MP. Ampio ilay fifandraisana 5G voalaza etsy ambony, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS, A-GPS, NFC ary maro hafa. ny ny rafitra fiasa dia Android 10 miaraka amin'ny OxygenOS toy ny sosona manokana.
SCREEN Fluid AMOLED 6.44 santimetatra miaraka amin'ny famaha Full HD + (2.400 1.080 x 20 teboka) - Aspect ratio 9: 90 - XNUMX Hz
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 / 256 GB UFS 2.1
CAMERAS REAR 48 MP Sony IMX586 OIS Main Sensor - 8 MP Wide Angle Sensor - 2 MP Macro Sensor - 5 MP halalin'ny sensor
CAMERA HATRANY 32 MP Sony Sensor IMX616 Sensor - Sensor - 8 MP Wide Angle Sensor
BATERA 4.115 mAh miaraka amina haingam-pandeha Warp Charge 30T amin'ny 30W
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny OxygenOS
CONNECTIVITY 5G - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - NFC
ASA hafa Mpamaky ny dian-tanan-tanana eo amin'ny efijery - bokotra ara-batana hampavitrika ny feo
DIMENSION SY lanjan'ny: 158.3 x 73.3 x 8.2 mm - 184 grama
El OnePlus North 5G Izy io dia tonga amin'ny safidy RAM sy fitehirizana roa samy hafa, tonga any Espana ny 4 Aogositra araka ny nasehon'ilay mpanamboatra tao amin'ny tranonkala ofisialin'i Espana. ny ny vidin'ny maodely 8/128 GB dia 399 euro ary ny maodely 12/256 GB dia 499 euro. Misy safidy loko roa, volondavenona sy manga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus Nord 5G dia ofisialy: Snapdragon 765G, hatramin'ny 12GB RAM sy Android 10